बजार फेरि बन्द गर्ने निर्णय : आवतजावतमा पनि रोक, यस्तो आयो सूचना ! - SudurSanchar
बजार फेरि बन्द गर्ने निर्णय : आवतजावतमा पनि रोक, यस्तो आयो सूचना !
October 6, 2020 adminLeaveaComment on बजार फेरि बन्द गर्ने निर्णय : आवतजावतमा पनि रोक, यस्तो आयो सूचना !
बैतडी । बैतडीको मेलौली नगरपालिकामा अनिश्चितकालका लागि पुनः नगरक्षेत्र सिल गरिएको छ । नगरपालिकामा कार्यरत गाडी चालकमा कोरोना पुष्टि भएपछि यसअघि असोज १३ गतेदेखि सिल गरिएको नगरक्षेत्र असोज १७ गते राती १२ बजेसम्म नगरक्षेत्र सिल गरिएको थियो ।
नगरपालिकाले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै अनिश्चितकालका लागि सिल गरिएको जनाएको छ । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कालीप्रसाद भट्टद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा संक्रमण पुष्टि भएका चालकको सम्पर्कमा रहेका सबैको रिपोर्ट नआएकोले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सबै सेवा बन्द हुने जनाएको छ ।
नगरपालिका तथा वडाकार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा बन्द हुने जनाइएको छ । यसका साथै बजारहरु बन्द गरी आवतजावत बन्द गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
शान्तिदिप प्राविधिक शिक्षालयका प्रिन्सिपल दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना हुँदा मृ’त्यु
ओलीले बोलाएको बैठकमा नजाने भनेर खनाल -नेपाल समुहले निकाल्यो यस्तो सुचना ( हेर्नुस सूचना )